China ALUMINUM LATTICE PANEL factory sy mpamatsy | Alucosun
ALUMINIUM LATTICE PANEL (A2）
PANELANA LATTICE ALUMINYUM
Alucosun Vaovao ® manolotra ny takelaka fitambaran-taranaka vaovao amin'ny alim-bolan'ny alimina vaovao fa tsy polyethylene mahazatra na fotony feno mineraly. Ity vokatra vaovao antsoina hoe tontonana latina aluminium ity dia novolavolain'i Alucosun ho an'ny fepetra henjana amin'ny famerana ny afo amin'ny vokatra maritrano.
Namboarina tamin'ny alàlan'ny firafitry ny aliminioma 100%, ny tontonana latabatra alucosun aluminium dia miaraka amina fampisehoana fireproof tsy manam-paharoa, maivana ary fanamorana ny famoronana fitambarana mahatonga ny tontolon'ny latabatra alucosun aluminium ao amin'ny nofin'ireo mpanao mari-trano.
Ny tontonana vita amin'ny kofehy vita amin'ny aliminioma dia misy vovo-aluminium tsy mora may ary miorina eo anelanelan'ny 0.7mm sy 0.5mm aluminium matevina (ambaratonga ivelany AA3003 na AA5005) ho an'ny lamosina.
EU BS EN 13501-1 Fihetsika afo- A2
Famokarana setroka- s1
Tetezana mirehitra- d0
HABE TOTAL 3MM, 4MM
HATSAKA NY HASITRAKA HORANA 0.50MM, 0.60MM, 0.70MM
sakany 1220MM, 1250MM, 1500MM, JAIBOLY hajaina azo zahana
NY FAHARETANY RANGE 1000MM-5000MM
Weight 3.8KG / M (0.5,0.4 / 4MM); 4.3KG / M (0.7,0.5 / 4MM)
TYPE ALLOY AA3003, AA5005
● Mavesatra maivana:
Miaraka amin'ny fanavaozana ny haitao fototra, ny tontonana latabatra Alucosun dia manana lanjany maivana kokoa noho ny fitaovana ara-tsimoramora mahazatra izay efa maivana kokoa noho ireo fitaovana hafa manana henjana mitovy. Mamonjy ny saran'ny fitaterana sy ny vidin'ny asa izany koa ianao.
● Fampisehoana tsy mandeha amin'ny afo:
Ity firafitra ity dia manome toky ny tontolon'ny tsy fahampian-tsakafo ary mahatonga azy io ho azo itokisana sy be mpitia amin'ny fampiharana façade rehetra, indrindra any Etazonia (NFPA285), UK (fenitra BS 476-4) ary Aostralia (fenitra AS1530.1) izay misy takiana avo kokoa ary mitaky ny faharetan'ny solika.
● Sariaka amin'ny tontolo iainana:
Amin'ny maha-mpikamban'ny tany antsika dia manana andraikitra hiaro ny tanindrazana isika. Ny ivon'ny alim-bolan'ny alucosun A2 dia mihodina 100% azo averina. Ary tsy misy fandotoana mandritra ny famokarana sy ny fampiharana.
● Herin'ny Peel
Ny latina matevina vita amin'ny kofehy vita amin'ny alimina dia fitaovana tsyabsorbent mitovy amin'ny takelaka roa. Ny fitaovana mitovy amin'izany dia miaina tsy fanitarana hafanana sy fihenjanana mihena. Mandritra izany fotoana izany dia manana fitsapana ny tanjaka peel isika isan-kerinandro ao anatin'ny 30 andro aorian'ny famokarana. Tsy misy delamination ireo takelaka misy anay.
● Fahamamoana setroka
Ny ankamaroan'ny fahafatesan'ny afo dia tsy vokatry ny may, fa noho ny setroka setroka, ny alucosun A2 core dia aliminioma madio ary tsy may may. Na dia singa simika aza ny atin'ny tontonana fireproof nentin-drazana hafa, dia azo antoka kokoa sy azo antoka ny takelaka vaovaontsika satria tsy misy mpamoaka azy rehefa mafana.
Ny latina aluminium vita amin'ny kofehy vita amin'ny alim-baravarankely dia mety ny manapaka sy manidina ary tsy mitondra amin'ny router. Noho izany, mamonjy ny teti-bolanao sy ny fotoanao izy. Izy io dia manana endrika maro isan-karazany ary ny endriny tonga lafatra dia tsy misy fiatraikany amin'ny fitoniany na ﬂ atness.
Properties STANDARD Fitsapana CONDITION na UNIT RESULT
Lanjan'ny singa ASTM D 792 Kg / m² 4.3
Matevina alohan'ny alimina - MG 0,7
Hatevin'ny rindrina EN ISO 2360-2003 μm 32
Hamafin'ny pensilihazo ASTM D3363 HB min 2H
Fiatrehana ny vokatra ASTM D2794 kg.cm F 110
Fifanarahana azo ampitaina ASTM D 4145 T-Bend (0-3T) 2T
Cohesion amin'ny Coating ASTM D 3359 Tsy misy fatiantoka firaiketam-po lasa
Fitazonana loko ASTM D 224 Max Rating 5 Units aorian'ny ora 4000 lasa
Fitanana gloss ASTM D 523 80% aorian'ny ora 4000 lasa
Fanoherana ny tsaoka ASTM D 4214 Unite Max Rating 8 aorian'ny ora 4000 lasa
Fanoherana ny rano mangotraka AAMA 2605 100 mandritra ny 20 minitra Latsaky ny 5% 4B
Fanoherana asidra muriatic AAMA 2605 10 nilatsaka 10% HLC, 15mn Tsy misy maharary
Fanoherana Alkali ASTM 1308 10%, 25% NaOH, 1 ora Tsy misy fiovana
Fanoherana ny tsifotra sira ASTM B117 Hatramin'ny 4000 Ora Tsy misy fiovana
Maripana ambany ambany - -40 - 80 Tsy misy fiovana
Herin'ny Peel ASTM D 1781 MG · N / MG 140mm · N / mm (Hoditra aloha) 125mm · N / mm (Hodi-damosina)
Faharetana amin'ny sintona ASTM E8 Mpa 5mm / min, 69MPa
Fanondroana fihenam-bidy mavesatra ISO 717-1: 2013 db 22 (-1, -2)
Ny fiantohana mahazatra dia 15 - 20 taona dia miankina amin'ny toerana misy ny tena tetikasa. 30 taona ny fiantohana dia azo alaina ho an'ny vokatra nished ambony.
Safidy isan-karazany sy faranana farany mahatonga ny Alucosun farany®safidy tianao indrindra amin'ny valopy fananganana. Fampirantiana isan-karazany, faharetan'ny rafitra kalitaon'ny loko hatramin'ny farany sns. manao azy ho fitoriana amin'ny fampiharana cladding na trano ara-barotra io, rafitra misy endrika manana ny maha izy azy na marika efa niorina. Alucosun Vaovao®manolotra karazana famaranana mahazatra sy fanao amin'ny trano fandrakofana coil ao an-trano. Alucosun Vaovao® Vita amin'ny rafitra hosodoko PVDF sy NANO ao anaty ny atiny fizotra coil mitohy izay miantoka ny kalitao sy ny tsy fiatoana amin'ny fanajana ny famaritana AAMA 2605.
PVDF rafitra fandokoana misy resina PVDF 70% voaforona no fantatra amin'ny fanoherana avo ny taratra UV sy ny vokatry ny tontolo iainana noho izany Alucosun® dia fahombiazana maharitra sy tsy miovaova amin'ny toe-piainana mahery.
NANA-PVDFdia rafitra fanadiovan-tena. Ny rafitra Paint toy izany dia manome palitao ambony mazava fanampiny miaraka amin'ny sombintsombiny NANO mifamatotra amin'ny PVDF Finish; izay miantoka malamalama ambonin`ny. Ny faritra madio sy madio dia mahatonga ny fotaka sy ny vovoka hifikitra izay manome endrika madio foana ilay trano. Ny rafitra fandokoana PVDF sy NANO dia maharitra maharitra 15-20 taona.
ANODIZED Ny takelaka misy safidy FInish isan-karazany dia hita ao Alucosun®na izany aza dia iharan'ny famerana fotoana sy habe sasany. Voajanahary voaaro amin'ny tontonana sosona anodized dia mateza mateza mateza dia manome antoka momba ny 30 taona.
PE sy HDPENy loko dia be mpampiasa amin'ny fampiharana maro noho ny habetsaky ny loko sy ny fiheverana ara-toekarena, ankehitriny ny taona azo antoka dia azo hitarina hatramin'ny 5 taona ka hatramin'ny 8 taona miaraka amin'ireo karazana firakotra. Ny famaranana HDPE dia azo alaina ho rafitra fandokoana mahazatra.
Rehefa eo am-pananganana ny vala ny latina makarakara aluminium, dia tokony hitroka amin'ny sisin'ny vala izy ary mety hanokatra ny V-groove sy U-groove, sns. Izy io dia hampiasa milina fandrehitra manokana ho an'ny tontonana aluminium mba hahazoana antoka fa tsy manimba ny halavan'ny alimina mifanohitra ny halalin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alim-by ary avela miaraka amin'ny 0,8 mm ny hateviny. Izy io dia mety mandray fepetra manamafy toy ny taolan-tehezana mifono sisiny, sns satria takiana amin'ny faritra mihombo.
Previous: PANELAM-PANORANA ALUMINIMA (HIDITRA)
Manaraka: PANELANA HONEYCOMB ALUMINYUM
Panel Lattice Aluminium
Hushi Industrial Park, tanànan'i Huashi, Tanànan'i Jiangyin, faritanin'i Jiangsu, Sina, 214421.
Fitaovana mitambatra (Jiangsu) no voafantina ...
Manomboka ny 1 septambra, hiara-hiasa i ...
Ny polyurethane vaovao momba ny bakteria vaovao dia manampy amin'ny fanasitranana ...
© Copyright - 2010-2020: Wisdom Metal Composites Ltd, Voatahiry ny zonao rehetra.